အကယ်၍သာ . . . | Myanmar Our Daily Bread
အကယ်၍သာ . . .
ကမ္ဘာကြီးသာပြီးပြည့်စုံခဲ့ရင်…၊ မကောင်းမှု၊ ရောဂါနှင့် သဘာဝကပ်ဘေးများသာ မရှိခဲ့ရင်…၊ မိသားစုများနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာ ပဋိပက္ခများ ကင်းရှင်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်…..၊ စားစရာ၊ ဝတ်စရာ၊ နေထိုင်စရာများအတွက် ပူစရာမလိုရင် ၊ဒါမှမဟုတ် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှာ၊ မိသားစုကို ပံ့ပိုးနိုင်စွမ်း မရှိမှာတွေကို ပူပန်စရာမရှိဘူးဆိုရင်…။
အကြောင်းမလှစွာဘဲ ကမ္ဘာကြီးဟာ ပြီးပြည့်စုံမှုရှိဖို့ အလှမ်းဝေးကွာလှပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်က အရာတော်တော်များများဟာ မှားယွင်းမှုများ ဖြစ်နေပါတယ်။ အချို့ပြဿနာတွေက သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပျက်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း အချို့က လူတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ပဋိပက္ခများနဲ့ ဒုက္ခများနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေကြပါတယ်။ သတင်းစာထဲမှာ နေ့စဉ် စစ်ပွဲ၊ ဆင်းရဲမှု၊ ရာဇဝတ်မှု၊ နာမကျန်းမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနဲ့ စီးပွားရေး ကျဆင်းလာမှု သတင်း တွေကို ဖတ်နေရပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ အများစုဟာလည်း မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝများမှာ ဒုက္ခတွေ ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။ တချို့ကတော့ ပျက်စီးနေတဲ့ ဆက်ဆံရေး၊ ဖျားနာမှု၊ စွဲလန်းမှုများနဲ့ ရုန်းကန်နေရ ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အမှန်တကယ်ပူပန်စရာတွေ၊ ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တွေ၊ တာဝန်ကြီးလှတဲ့ ကတိကဝတ်တွေကြောင့် ဝန်ပိနေကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာတွေမှားနေလဲ၊ ဘဝက ဘာလို့ဒီလောက် ခက်ခဲနေရလဲ၊ ငါ့ဘဝက ဘာလို့ ပိုမိုသက်သာမှု မရှိနိုင်တာလဲလို့ ကျွန်ုပ်တို့တွေးကြပါတယ်။
ပိုကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့သိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြည့်စုံတဲ့၊ ကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့နေရတယ်။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အချိန် ကာလ အကြောင်းတွေ ဖတ်ရတယ်၊ ဒုက္ခကင်းဝေးပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကို လျှောက်လှမ်းနေသူတွေအကြောင်း ကြားရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် အရင်က ဒီလိုပျော်ရွှင်စရာအချိန်များကို တွေ့ကြုံခဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေက ကျွန်ုပ်တို့ကို ပိုပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေလာပြန်တယ် မဟုတ်လား။ ပိုကောင်းလာ နိုင်တယ်ဆိုတာ သိနေလျက်နဲ့ ကောင်းလာတာကို မတွေ့ရဘူး။
တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်နေတာက မျှော်လင့်ချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဒုက္ခတွေက ထွက်ပေါက်ပေးမယ့် မျှော်လင့်ချက်၊ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ မျှော်လင့်ချက်၊ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကို ရရှိဖို့ မျှော်လင့်ချက်ပဲ။